Pitbull naMariah Carey kujekesa 2019 Curacao North Sea Jazz Mutambo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Pitbull naMariah Carey kujekesa 2019 Curacao North Sea Jazz Mutambo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Curacao Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Dai 3, 2019
Sangano reCuracao North Sea Jazz Festival rinozivisa mazita matsva nhasi. Pitbull ichavhura padanho reSam Cooke neChishanu, 30 Nyamavhuvhu uye Mugovera - Mariah Carey. VaMaxwell, Michael McDonald naKenny G. Aloe Blacc naDavid Sanborn vanowedzerwawo neMugovera. Ivo vanobatana neyekare yakaziviswa Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight uye Third World. Mutambo uyu unovhura neChina, 29 Nyamavhuvhu nemakonsati emahara eHaana D'Primera naAymée Nuviola. Mitikiti yemanheru ano ichagoverwa muSambil neSvondo 2 Chikumi.
Pitbull muAmerican rapper, mugadziri uye munyori wenziyo wedzinza reCuba kubva kuMiami. Muna 2004, Pitbull akaburitsa dambarefu rake rekutanga MIAMI, rairatidza zvakanyanya Lil Jon. Parizvino, akaburitsa maalbum gumi, ayo ekupedzisira ari 2017 eClimate Change. Nezve rake ra2015 Dale, Pitbull akagamuchira Mubairo weGrammy we Best Latin Rock, Urban kana Alternative Album. Pakazara, akatengesa anopfuura mamirioni mashanu emaarubhi uye makumi matanhatu mamirioni singles pasirese uye asvika nhamba 5 munyika gumi neshanu.
Kana paine chero munhu asingade chero sumo, ndiMariah Carey. Muimbi akasimuka kuita mukurumbira muna1990 naiye smash hit single Vision Of Love uye yake eponymous debut album. Pakarepo nyika yakateerera, kwete mudiki nekuda kweyaCarey's-octave yezwi renji uye siginecha yekushandisa iyo muridzo rejista. Akave muimbi wekutanga kuve nevakaroora vavo vekutanga vashanu vanosvika nhamba yekutanga pane US Billboard Hot 100 chati. Carey akahwina mashanu maGrammy Awards, gumi nepfumbamwe World Music Awards, gumi American Music Awards, uye gumi nemana Billboard Music Awards. Akatengesa anopfuura mazana emamiriyoni ealbums pasirese.
Muimbi-munyori wenziyo Maxwell akabatsira pakuunza neo-mweya kufamba kune mukurumbira pamusoro pehafu yekupedzisira yemakumi mapfumbamwe. Mushure mekuzviitira mukurumbira mukirabhu yeNew York kirabhu, Maxwell akasaina kondirakiti yekurekodha ndokutanga neAlbum yaMaxwell's Urban Hang Suite ya90, yaakapihwa kudomwa kwake kwekutanga kweGrammy - nevamwe vazhinji vekutevera. Mushure mematatu maalbum uye makore manomwe-gore hiatus, akaburitsa 1996 YEMAHARA summers'night; chikamu chekutanga che trilogy iyo chikamu chechipiri, BLACKsummers'night, chakaburitswa mu2009.
Michael McDonald akakurira muMissouri, achitamba mumabhendi emuno asati aenda kuLos Angeles mukutanga kwema1970. Muna 1974 akazova nhengo yaSteely Dan uye mushure mezvo akabatana neDoobie Brothers. Semuimbi, keyboardist, nemunyori iye akapa kune dzakadai dzekare hits se Takin 'It To The Streets, It Keeps You Runnin', uye What A Fool Believes. Munguva ye'ma80s uye '90s, rake ega basa akaziva kubudirira senge Nerusununguko Rusununguko uye mbiri mbiri duo: Pane Ini Pangu naPatti LaBelle naJah Mo B Ikoko naJames Ingram. Ane Grammys shanu kuzita rake; yake yazvino dambarefu Wide Open yakaburitswa muna 2017.
Nekutengesa kwepasirese kunosvika pamusoro pe 75 mamirioni marekodhi, saxophonist Kenny G ndiye anonyanya-kutengesa chiridzwa muimbi wenguva dzese. Achikura saKenny Gorelick muSeattle's Seward Park, akasangana nesaxophone paakanzwa mutambo paEd Sullivan Show ndokutanga kutamba aine makore gumi. kutengesa chiridzwa album zvachose; makore maviri gare gare, dambarefu rake reMinana rakave rakanyanya kutengeswa krisimasi album zvachose. Gorelick anoenderera mberi achitenderera pasirese; yake yazvino dambarefu, Brazilian Nights, yakaburitswa mu10.
Muimbi wemuAmerican-munyori wenziyo Aloe Blacc akatanga basa rake roga muna 2003, achizopedzisira awana vateereri vazhinji na2010's hit single I Need A Dollar. Muna 2013, imwe chete Wake Me Up, iyo Blacc yakanyora pamwe nekuimba pamwe neSweden DJ Avicii, yaive yekutanga kurova munyika zhinji. Dambarefu rake rechitatu, Simudza Mhepo Yako, zvakare rakatangira gore rimwe chete, pamwe neiyo EP Wake Me Up. Pakutanga gore rino akaburitsa yake yazvino bhaisikopo I'm Gonna Sing; iye zvakare anoonekwa paSOS, iyo nyowani nyowani yeanonoka Avicii.
David Sanborn anga achivhiringidza miganhu pakati pemhando kubva pamakumi masere uye anoonekwa seimwe yeanonyanya kukurudzira saxophonists pasi rose. Simba rake risingagumi rakabhadhara zvikwereti: Sanborn akarova zvinyorwa zvisere zvendarama, imwe rekodhi yeplatinamu uye maGrammys matanhatu. Achiridza sax kubva paudiki, Sanborn akaburitsa yake yekutanga solo albhamu muna 1975; Kutora Off mazuva ano kunoonekwa sechimwe chinhu chejazi / funk classic.
Brazilian kuunza basa rekuita chinja ubwana kisimusi Classic mamiriro okunze Kuchinja kwemamiriro ekunze kirabhu Concerts yasimbiswa udza mashoko inoenderera mberi chibvumirano Cuban muCuraçao zuva Mazuva debut DJ dhora kare mangwanani sere simba mutambo kuwana tevera rusununguko G kutengesa kwepasirese pasi pose yendarama Grammy kukura hafu Havana anosimbisa rova Hot ziviso Jazz jazz festival Join akabatanidzwa Chikumi kunonoka Papera tsva Latin yakatanga simbisa mutsetse mutsetse-up Los Angeles rudo M nhengo Miami Missouri moved mufambo mumhanzi zita mazita vanoda nharaunda NEO New York husiku usiku sarudzo Mawodzanyemba wekutanga Sangano rwakabhadharwa paki mutambo kuita Platinum dungwerungwe vakagamuchira rekodhi zvinyorwa akasunungurwa rudyi ibwe akasimuka rokutengesa chiitiko Gungwa Seattle chepiri kutengwa nomwe ratidza siginicha zvakasinwa muimbi vasina singles akatengeswa Solo Mweya mweya Akatanga Studio Suite Swedish Sweet kutora matikiti chizere kushanya mutaundi shandisa kuona akaenda Won Pasi rose akanyora York